Nagu saabsan - Wuxi Flyt New Energy Technology Co., Ltd.
Waxaan u heellan nahay inaan u fidino macaamiisheenna alaab tayo sare leh iyo adeegyo qanciya.
Wuxi Flyt New Energy Technology Co., Ltd., waa soo saare xirfadle ah oo leh nidaam marawaxadaha dabaysha yar yar iyo dhex dhexaad ah iyo qalab ku habboon. Waxaan ku mashquulsaneyn cilmi baaris iyo codsi marawaxadaha dabaysha yaryar laga bilaabo 100w-50kw sanado badan. Saldhig ballaaran oo wax soo saar oo daboolaya aag 1000 mitir murabac ah wuxuu ku yaal magaalada Wuxi, Gobolka Jiangsu, oo 120 kiiloomitir u jirta Shanghai iyo 200 kiiloomitir oo u jirta Nanjing, oo leh shabakad gaadiid cod bixisa oo ah marin biyood, waddo dhakhso leh, tareen iyo garoon diyaaradeed.
Shirkadayadu hada waxay leedahay shaqaale aad u tiro badan oo xirfadlayaal ah, qalab wax soo saar iyo horumarsan oo wax soo saar leh, gaar ahaan tuneelka dabaysha kaas oo abuuri kara xaalado suuragal ah oo ku saabsan soo saarista iyo tijaabinta alaabada sanado badanna waxay sameysay nidaam isku dhafan oo naqshadeynta, wax soo saarka, suuq geynta, rakibaadda, xallinta. iyo iibka kadib. Marawaxadaha dabayshu waa CE, ISO oo shahaado haysta iyo dhowr shati oo sharaf leh. Xaq u lahaanshaha hantida keli ah iyo iskaashi ballaaran oo lala yeesho suuqyada caalamiga ah ayaa ka hadlaya tayada, isku halaynta iyo joogtaynta wax soo saarkeena. Waxaan ku leenahay mashaariic marawaxadaha dabaysha Shiinaha oo dhan iyo dibaddaba kuwaas oo dhammaantood si wanaagsan loo soo dhoweeyay.
Waxaan nahay samaynta alaabooyinka cusub si dhakhso leh.
Waxaan u fidineynaa habka lagu ansaxiyo naqshadeeyayaasha wax soo saarka;
Waxaan nahay soo saare si aan u siino aasaaska caadiga ah.
Waxaan u oggolaaneynaa macaamilka inuu dareemo waayo-aragnimada ugu fiican ee naqshadeynta, waxaan ka caawinnaa iyaga inay gaaraan qiime u gaar ah.
Waxaan si buuxda ugu heellan nahay inaan hagaajino dadaallada qancinta macaamiisha, si aan kor ugu qaadno qiimaha dheeriga ah ee macaamiisha.
adeegga ugu muhiimsan
hal-abuurnimada hindisaha, geesinimada dhiig-miirashada
tayada iyo hufnaanta
Tayada adeegga macmiilku waa nolosha shirkadda, sidoo kale waa aasaaska ay shaqaale kastaa ku shaqeeyaan sida ugu fiican ee aan ku qancin karno macaamil kasta, si amar kasta loo dhammaystiro.
Hayso maskax furan, fikrado hal abuur leh, sahamiya habab cusub, sii wad inaad dhaafto.
Joogtee dadaal hufan, shaqo kooxeed, ganacsi hufan, noqo hormuudka warshadaha.
Sii wad hagaajinta, abuur alaab tayo sare leh oo ka sarreysa rajada macaamiisha.
Kor u qaadista waxtarka, si deg deg ah uga jawaab celinta shuruudaha macaamiisha.
U qaado macmiilka xarun ahaan, horumarinta ganacsiga oo ah bar bilow ah, oo ku saleysan macaashka shaqaalaha, si joogto ah u wanaajiya tayada adeegga macaamiisha, siinta meel ballaadhan oo horumarineed shaqaalaha shirkadda, si loo gaaro macaamilka, ganacsiga, shaqaaluhu u guuleystaan- guuleysto xaalada.